Teo Anosy no nanomboka ny sakororoka ary nitohy hatreny 67ha. Nisy mpandeha taksibe iray nanome saran-dalana 400 ariary izay noheveriny fa tapa-dalana, ny alahady maraina teo. Nitrerona anefa ilay mpamily mpanampy fa tokana ny saran-dalana, 500 ariary ihany. Mbola nisy tovolahy hafa indray anefa teo Ampefiloha ka 300 ariary no nomeny. Vao mainka avo vava hatrany ilay mpitaky saran-dalana ary nilaza hatrany fa tokana ny saran-dalana. Ilay nanome vola anefa nanamafy fa eo amin’ny fokontany 67ha Atsimo izy no miala.
Tsy zakan’ireo mpandeha ny teny mandratran’ilay mpamily mpanampy, ary nanampy trotraka izany ny teny ratsin’ilay mpamily izay niaro ity namany. Najanon’izy ireo ilay fiara, notereny hidina ireo olona ary nanaovany feo avo sy vava tsy ambina sady nandidy ilay mpitango saran-dalana ny mpamily mba hamerina ny saran-dalan’ireo. Niray hina ny mpandeha rehetra ka raikitra ny fifamazavazana.
Manoloana ny be no ho vitsy, nilefitra tsy fidiny ireo tompona fiara. Nilaza izy ireo fa tafahoatra koa ny “versement” enjehin’izy ireo amin’ny andro tsy fiasana. Misy amin’ireo mpamily taksibe sy ny mpanampy azy anefa, ankoatra ny karamany isam-bolana, hatramin’ny niakaran’ny saran-dalana ho 500 ariary, indrindra tamin’ny fidinan’ny vidin-tsolika no mahazo hatramin’ny 100 000 ariary avy amin’ny andro iray.